WordPress အတွက် Landingi ၏ကမ်းတက်စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူနှင့်ပိုမို ဦး ဆောင်လမ်းပြရန် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မတ်လ 3, 2021 တနင်္လာနေ့, မေလ 16, 2022 Douglas Karr
စျေးကွက်သမားအများစုသည် WordPress စာမျက်နှာတွင်ပုံစံတစ်ခုကိုသာထည့်သွင်းကြသော်လည်း၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာကောင်းမွန်စွာပြုပြင်ပြောင်းလဲထားသည့်ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာမဟုတ်ပေ။ ကမ်းတက်စာမျက်နှာများတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်အင်္ဂါရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
အနည်းဆုံးအာရုံ - သင်၏နိမ့်ကျသည့်စာမျက်နှာများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်အနည်းဆုံးဖြစ်စေသောအဆုံးအဖြစ်ထင်မြင်ပါ။ သွားလာမှု၊ ဘေးချင်း၊ အောက်ခြေနှင့်အခြားအရာများသည်သင်၏ or ည့်သည်ကိုအာရုံပျံ့လွင့်စေနိုင်သည်။ ဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာတည်ဆောက်သူတစ် ဦး ကသင့်အားစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဘဲပြောင်းလဲခြင်းသို့ရှင်းလင်းသောလမ်းကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။
Integrated - သင်၏ ဦး ဆောင်မှုစာမျက်နှာပေါ်တွင်ခဲတစ်လုံးပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အမျှ ဦး ဆောင်မှုကိုသင့်လျော်သောသူထံလွှဲပြောင်းပေးသည်သို့မဟုတ် OR ဖောက်သည်များဖြစ်လာစေရန်သူတို့ကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှုတွင်ပါဝင်သည်။
A / B / x စမ်းသပ်ခြင်း - Landing စာမျက်နှာများသည်ဒြပ်စင်တစ်ခုစီကိုစျေးကွက်သမားများအတွက်အလွယ်တကူစမ်းသပ်နိုင်ပြီးတိုင်းတာနိုင်သောမူကွဲတစ်ခုစီရှိသင့်သည် သူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းနှုန်းထားများပိုကောင်းအောင်.
ကတော့ - သင်၏ဘာသာပြန်ဆိုနိုင်စွမ်း ဝယ်သူခရီး တိုင်းတာရန် အရောင်းကတော့ခြေလှမ်းများ အဆင့်တစ်ခုစီတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်သင်၏သုံးစွဲသူ၏အပြုအမူကိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။
ပုံတူပွား - ဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာတစ်ခုသည်ပစ်မှတ်ထားသောဆင်းသက်နိုင်သောစာမျက်နှာများစွာကဲ့သို့အလုပ်မလုပ်ပါ။ သင်ပြောင်းလဲရန်သင်ရှာနေသည့်စျေးကွက်အတွက်မြေပေါ်စာမျက်နှာတစ်ခုစီကိုထပ်တူကျအောင်လုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းသည်ပိုမိုထိတွေ့မှုရှိစေပြီးနောက်ဆုံးတွင် ၀ င်ငွေရရှိလိမ့်မည်။
Landingi Landing Page တည်ဆောက်သူ
Landingi ဤအဖြေရှင်းချက်အားလုံးနှင့်ပိုပြီးပေးပါသည်။ က မင်းမြင်တာကမင်းရတာပါပဲ (WYSIWYG) ဆွဲယူပါ၊ အကန့်အသတ်မရှိသော landing စာမျက်နှာတည်ဆောက်သူကသင့်အားအမြောက်အမြားကိုချွေတာခြင်းဖြင့်တင်းပလိတ် (၃၀၀) အစုအဝေးမှအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းသောဆင်းသက်နိုင်သည့်စာမျက်နှာများကိုလျင်မြန်စွာလှိမ့်ချနိုင်၊
ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားအကန့်အသတ်မဲ့ A / B စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီးသင်၏ဆင်းသက်သည့်စာမျက်နှာများကိုတက်ကြွသောအကြောင်းအရာများနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီစေရန်ထောက်ခံသည့်အင်ဂျင်ကိုပင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
40+ ပေါင်းစည်းမှု၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့် ပစ်မှတ်ထားသော ကိရိယာများကို သင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှု၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အခွင့်ကောင်းယူပါ။ Pass သည် သင်အသုံးပြုနေသည့် အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး သို့မဟုတ် CRM ကိရိယာတိုင်းနီးပါးကို ဦးတည်စေပြီး၊ ကဲ့သို့သော ဖြေရှင်းချက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ MailChimp, HubSpot, SalesForce နှင့် Zapier ။
Landingi သည် Popups ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
အကယ်၍ သင်သည်စကားဝိုင်းများကိုထပ်မံထုတ်လွှင့်လိုလျှင်၊ ထွက်ရန်ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆိုက်ပေါ်ရှိအချိန်၊ သို့မဟုတ်အတိမ်အနက်ကို အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာသော popup တစ်ခုကိုစတင်လိုပါက၎င်း ဦး ဆောင်မှုကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ Landingi ကအဲ့ဒါပဲကမ်းလှမ်းထားတယ်။
Landing စာမျက်နှာ WordPress ပလပ်အင်
စာမျက်နှာဖြေရှင်းနည်းများကို subdomain မှတဆင့်ပို့ဆောင်ရန်သင့်အားမကြာခဏလိုအပ်သည် Landingi တစ်ဦးကမ်းလှမ်း WordPress ကို Plugin ကို သင်သည်သင်၏အတွင်းပိုင်းသို့ဆင်းသက်စာမျက်နှာကိုထုတ်ဝေနိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာ WordPress site ကို!
သင်၏ Landingi ကို WordPress Landing စာမျက်နှာအခမဲ့စတင်ပါ
ထုတ်ဖော်: ငါအဘို့အမိတ်ဖက်တယ် Landingi ငါဒီဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးအဲဒီလင့်ခ်ကိုသုံးတယ်။
Tags: ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက်ထွက်ပေါက်ရည်ရွယ်ချက် popupဆင်းသက်စာမျက်နှာဆောက်စာမျက်နှာ plugin ကိုဆင်းသက်စာမျက်နှာ wordpress plugin ကိုဆင်းသက်သည်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများမင်္ဂလာပါPopups ဖြစ်ပေါ်သည်wordpress ဆင်းသက်စာမျက်နှာများwordpress plugin ကို